जथाभावी बाटो नकाटौंला, तर जेब्रा क्रसिङ त हुनुपर्यो नि (भिडियो) – Nepal Japan
नेपाली समय : 02:48:40
जापानी समय : 06:03:40
जथाभावी बाटो नकाटौंला, तर जेब्रा क्रसिङ त हुनुपर्यो नि (भिडियो)
1 June, 2017 14:17 | अन्तरवार्ता | comments | 189750 Views
मुलुकको राजधानी अनि पहिलो महानगपालिका काठमाडौंको सबभन्दा ठूलो समस्या सडक अव्यवस्थापन हो । यसका अनेक कारण छन् ।
धेरैले सडकको क्षमताभन्दा बढी सवारीसाधन भएकाले व्यवस्थापन हुन नसकेको भन्छन् ।
वास्तवमा त्यो प्रमुख कारण होइन । प्रमुख कारण महानगरबासीले पालना नगर्ने अनुशासन हो । सडक नियम उल्लंघन गर्नु यी सबको कारण हो । यसको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष जथाभावी बाटो काट्नु हो ।
यो समस्या समाधानका लागि जेठ १६ गते मंगलबारदेखि महानगरीय ट्राफिक प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकामा जथाभावी बाटो काट्नेलाई कारबाही थाल्यो । एकै दिनमा ३ हजार ३ सय ५० जनालाई नियनत्रणमा लिएर कारबाही गरियो । यसमध्ये २ हजार १ सय २० जनाले २ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरे र यसबाट ट्राफिकले पैदलयात्रुसँग एकैदिनमा ४ लाख २४ हजार रुपैयाँ जरिवना उठायो ।
ट्राफिक प्रहरी तथाा स्वयंसेवकहरुले जथाभावी बाटो काट्ने र पेटी छाडेर सडकबाट हिँड्ने यात्रुलाई नियन्त्रणमा लिएर जरिवाना गर्न सुरु गरेको छ । जरिवाना नतिर्नेलाई ३ घण्टा प्रहरीको नियन्त्रणमा राखिनेछ ।
ट्राफिक प्रहरीले उपत्यकामा हुने दुर्घटनामा मृत्यु हुने पैदलयात्रुको संख्या ४० प्रतिशत भन्दा बढी भएकाले त्यसलाई न्युनीकारण गर्न यो ब्यवस्था गरिएको बताएको छ ।
कतिपय सर्वसाधारणले भने जेब्रा क्रसिङ, पेटी लगायत पूर्वाधारको उचित रेखाङ्कन र निर्माण नभएकाले यसले यात्रुलाई सास्ती मात्रै दिएको बताएका छन् । कतिपयले भने ब्यवस्था राम्रो भएको भन्दै प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नमाग गरेका छन् ।
काठमाडौंका सडकमा बाटो काट्ने जेब्रा क्रसिङ कति मिटरको दूरीमा छ ? यसलाई सुधार्नुपर्छ कि पर्दैन । नियम बनाएर सर्वसाधारणलाई मात्रै कारबाही गर्दै जाने कि उनीहरुलाई सुविधा पनि दिने ?
बाटो काट्नेमाथि कारबाही सुरु भएपछि एनआईटीभी मिडियाले तयार पारेको यो भिडियो रिपोर्टिङ यहाँहरुसमक्ष-